Muxuu ka yiri Unai Emery mustaqbalka Koscielny & qorshahooda inta maalmood ee ka harsan suuqa? – Gool FM
(London) 01 Agoosto 2019.Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Unai Emery ayaa xaqiijiyay inuu isku dayayo inuu ka dhaadhiciyo Laurent Koscielny inuu la sii joogo kooxda reer London illaa iyo dhamaadka qandaraaskiisa June 2020.
Daafaca reer France ee Laurent Koscielny ayaa muujiyay rabitaan ah inuu dib ugu laabto dalkiisa hooyo ee France, wuxuuna yaboohyo ka helayaa kooxo ay ka mid tahay Bordeaux.
Hadaba tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Unai Emery ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Laurent Koscielny waa ciyaaryahan aad muhiim inoogu ah, walina waxaan rajo ka qabnaa inaan sii heysan doono”.
“Wax badan ayaan la hadlay isaga, waxaana isku dayay inaan ku qanciyo inuu nala sii joogo waqtigaan”.
“Waxa ugu horeeya uu haatan ku fikirayo ayaa ah inuu naga tago, sidaas darteed waa inaan badalnaa istiraatiijiyada, waxaana heysanaa 8 maalmood ee ka harsan suuqa, waa inaan gaarno go’aan ah inaan keeno daafac kale, waana inuu ka fiicnaadaa kuwa aan hada haysano”.
“Chelsea hal dhibaato ayaa haysata” _ Jose Mourinho